Iirekhodi zoKhenketho ze-PGA: I-Stroke ephantsi kwiNinzi
Eli rekhodi lichaphazela amanqaku aphantsi kakhulu (amaninzi amathandathu ngaphezulu kweemingxuma ezingama-72) kwimidlalo yamagosa amakhulu. Iintandathu ezisixhenxe ezisezantsi zifikelele kwiziganeko ezintathu nje. Siza kuqala nge-record holder, uze ubonise uluhlu lwamanqaku ayisithoba aphantsi, kwaye ke uludwe lwamanqaku aphantsi kakhulu.
Ingxelo Yamanje yePalest Winning Score yi-264
Amanqaku aphantsi kunazo zonke aphinde athunyelwe kwiihombo ezingama-72 kwelinye lamagosa egalufa lamadoda angama-264, kwaye yafakwa nguHenrik Stenson ngo-2016 eBritish Open.
Amanqaku kaStenson kwinqanaba ngalinye lalingama-68, 65, 68 no-63. U-Stenson wayebophelele irekhodi yezona zibonda ezili-18 eziphambili ngelo xesha lokugqibela elingama-63, kwaye wacima iirekodi zakhe ezimbini (izimbobo eziyi-18, izimbobo ezingama-72) kunye noyiso nebhodi yokugqibela.
I-Low-Overle Stroke Totals in Majors
264 - uHenrik Stenson, ngo-2016 eBritish Open
265 - UDavid Toms, 2001 wePGA Championship
266 - UPhilip Mickelson , 2001 wePGA Championship
266 - UJimmy Walker, u-2016 we-PGA Championship
267 - USteve Elkington, 1995 wePGA Championship
267 - UColin Montgomerie , 1995 wePGA Championship
267 - UGreg Norman , 1993 i-British Open
267 - UPhil Mickelson, ngo-2016 i-British Open
267 - Jason Day, 2016 I-PGA Championship
Usizi olungamahlwempu uMickelson, iMontgomerie kunye noSuku, abenza lolu luhlu asizange baphumelele nakwii-tournaments! UMickelson wagqiba ukuphazamiseka emva kweToms xa uToms esungula irekhodi. Kwaye, emva kweminyaka engama-15, uMickelson wagqiba ezintathu emva kweStenson xa uStenson wabeka irekhodi elitsha.
UMonty waphulukana no-Elkington ngokukhawuleza. Kwaye uSuku wagqiba omnye emva kwe-Walker ngo-2016 i- PGA .
Iingxelo eziNcinci zokuNqoba eziPhantsi
Nazi iirekhodi zamanqaku amaninzi aphantsi kwezi zibane ezine:
Masters: 270, iTiger Woods, 1997; kunye neJordan Jordan , 2015
US Open: 268, uRory McIlroy , 2011
I-British Open: 264, uHenrik Stenson, 2016
I-PGA Championship: 265, uDavid Toms, 2001
Abaculi Bomculo baseColombia
Iimpahla zokukhusela kunye neZiko loKhuseleko Igalari yezithombe
Indlela yokudibanisa "Uhlawulelo" (ukwenza i-Angry)
Izazi zenzululwazi zithatha i-Historic Stand Standing on Racism and Police
Ukuhlaselwa kweeKilisi zeKamela!